FTTH Optical Mugamuchiri Vagadziri & Vatengesi | China FTTH Optical Mugamuchiri Fekitori
Outline ZHR1000M Mini Optical node yakakwira mukuita, yakanaka mukuvimbika, yakaderera musimba yekushandisa diki vhoriyamu, uye yakanaka kune network yeFiber To Iyo Node / Fiber KuKumba (FTTH). Maitiro • Kakawanda 40MHz -1002MHz. • Gallium arsenide gudzazwi inoshandiswa ine yakanaka performance index. • Kune metric system (kana Chirungu system) radio frequency kuburitsa chiteshi uye DC12V ~ 15V yakazvimirira DC magetsi poti chiteshi. • Diki aluminium die cast casing, yakaumbwa zvakanaka, yakanaka kumba-kushandiswa. • Shandisa SC / ...
ZHR860MF Micro Optical Mugamuchiri
Kunyorera Fibhi kumba (FTTH) network. Feature Shandisa ye fiber kune yekumba network. Solid die-cast aluminium dzimba. Input yekubatanidza SC / APC uye RF kuburitsa neF mukadzi chinongedzo. Iine 2-nhanho LED yekuisa simba chiratidzo. Simba rekuisa simba -10 ~ + 3dBm Kuburitsa nhanho 75 ~ 80dBuV. Vaka-mune AGC basa. Ruzha ruzha gudzazwi rakagadzirwa mukusunda-dhonza tekinoroji. Yakadzika kwazvo simba rekushandisa ＜ 2.0W. Parameter Performance Unit Index Optical parameter Kushanda wavelength nm 1550 Inzwaji simba dBm ...
FTTH Optical Mugamuchiri kuvaka-muWDM ZHR860MD
Pfupiso ZHR860MD ndeye yakakwira kuita uye kwakanyanya kuvimbika kwemaziso ekugamuchira. Inotorwa michina yekuona yeupamhi hwesimba renji, ichiona otomatiki kudzora (AGC) mashandiro eiyo RF kuburitsa nhanho yemagetsi emagetsi ekuisa chiratidzo munzvimbo ine simba rakakura se -10 ~ -3dBm mudunhu. Maitiro Ekushandisa bandwidth ndeye 47 ~ 1000MHz. Imwe-nzira yakaderera ruzha RF chiratidzo kuburitsa, iri mari uye inoshanda. Iine zvinongedzo zvekugonesa magetsi uye emagetsi simba. Optical auto kuwana kutonga (AGC) basa. Ne PO ...
FTTH Micro Optical Mugamuchiri ZHR100L
1.Overview ZHR100L Mini Optical Node yakakwira mukuita, yakanaka mukuvimbika, yakaderera musimba mashandisiro, diki vhoriyamu, uye yakanaka kune network yeFiber To Iyo Node / Fibhi KuKumba (FTTH). 2Feature 1) 1310nm uye 1550nm optional windows inoshanda 2) Frequency 40MHz -1002MHz 3) Gallium arsenide amplifier inoshandiswa ine yakanaka performance index. 4) Kune metric system (kana Chirungu system) radio frequency kuburitsa chiteshi uye DC12V ~ 15V yakazvimirira DC magetsi poti chiteshi. 5) Small aruminiyamu ikafa kukanda c ...